ဒီ ဒီး တို့ တောင် မ သိ တာ ကို သူ တို့ က ဆေး လုံး လို့ ပဲ ထင် တာ ပေါ့ လို့စန္ဒီ မြင့် လွ င် ပြော - Real Gaming Myanmar
ဒီ ဒီး တို့ တောင် မ သိ တာ ကို သူ တို့ က ဆေး လုံး လို့ ပဲ ထင် တာ ပေါ့ လို့စန္ဒီ မြင့် လွ င် ပြော
နိုင် ငံ ကျော် အ ဆို တော် မ လေး စန္ဒီ မြင့် လွင် ဟာ ဆို ရင် ပ ရိ သတ် တွေ ချစ် ခင် အား ပေး ရ တဲ့ သူ လေး ပါ ။
သူ မ က လူ ငယ် အ ဆို တော် များ စွာ ထဲ မှာ အောင် မြင် မှု များ စွာ ရ ရှိ ထား သူ လေး ဆို လည်း မ မှား ပါ ဘူး ။
သူ မ ရဲ့ သီ ချင်း လေး တွေ က လူ ငယ် ပ ရိ သတ် တွေ ရဲ့ အ ကြိုက် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ဒီ နေ့ မှာ တော့ စန္ဒီ မြင့် လွ င်က အ ဆို တော် ဖြိုး ပြည့် စုံ နဲ့ ပတ် သက် ပြီး ပြော ထား တဲ့ အ ကြောင်း ကို ဖော် ပြ ပေး လိုက် ပါ တယ် နော် ။
၇ . ၁ ၀ . ၂ ၀ ၁ ၉ ရက် နေ့ မှာ အ ဆို တော် ဖြိုး ပြည့် စုံ အ ပါ အ ဝင် အ မျိုး သား သုံး ဦး ကို မူး ယစ် တပ် ဖွဲ့ က တ ရား လို ပြု တိုင် တန်း မှု ကြောင့် ဗ ဟန်း ရဲ စ ခန်း မှာ ဖမ်း ဆီး ထိန်း သိမ်း ထား ခြင်း ခံ ထား ရ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
အ ဆို တော် ဖြိုး ပြည့် စုံ ကို ဆေး ပြား များ ဖြင့် တွေ့ ရှိ တယ် ဆို တဲ့ သ တင်း အ ပေါ် ဖြိုး ပြည့် စုံ က သူ့ လက် ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ ဆေး ပြား တွေ က မူး ယစ် ဆေး ဝါး များ မ ဟုတ် ကြောင်း ငြင်း ဆို ခဲ့ ပါ တယ် . . . ။
ဖြိုး ပြည့် စုံ ဖမ်း ဆီး ခံ ထား ရ တာ နဲ့ ပတ် သက် ပြီး ” ကို ဖြိုး က အဲ့ လို လူ စား မျိုး လုံး ဝ မ ဟုတ် ဘူး ။ အ လုပ် တွေ လည်း အ တူ တွဲ လုပ် ဖူး တယ် ။ သူ က အ ရမ်း ယဉ် ကျေး ပြီး နူး ညံ့ တဲ့ သူ ဆ ရာ ဝန် လည်း ဖြစ် တယ် လေ ။ သူ က လုံး ဝ လုပ် မှာမဟုတ်ဘူး ။ ”
“ ဒီ မှာ က မ ရ ဘူး မ မြင် ဖူး တဲ့ ဟာ ကို သူ တို့ က ဆေး လုံး လို့ ထင် တာ ပေါ့ နော် ။ ဒီ ဒီး တို့ တောင် မ သိ ဘူး ဆို တော့ သူ တို့ လူ ကြီး တွေ အ ဖိုး ကြီး တွေ က ဘယ် လို လုပ် သိ မ လဲ ။ စိတ် ထဲ မှာ တော့ မ တ ရား ဘူး လို့ ပဲ ထင် တယ် ” လို့ ဖြိုး ပြည့် စုံ မူး ယစ် အ မှု နဲ့ ထိန်း သိမ်း ခံ ရ တဲ့ အ ပေါ်သူ မ ရဲ့ အ မြင် တွေ ပြော ပြ သွား တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
သူ မ က တော့ လုံး ဝ ပြန် ထွက် လာ မယ် လို့ ယုံ ကြည် တယ် ။
သူ က အဲ့ လို ဖြစ် ဖို့ ကံ မ ပါ တာ ထွက် ကို ထွက် လာ မယ် လို့ ပြော သွား ပါ တယ် ။
ယ ခု အ ခါ မှာ တော့ စန္ဒီ မြင့် လွင် ပြော ခဲ့ သ လို ပါ ပဲ ။
ပ ရိ သတ် တွေ မျှော် လင့် ထား သ လို ဖြိုး ပြည့် စုံ နဲ့ သူ ငယ် ချင်း ၂ ဦး ပြန် လွတ် လာ ကြောင်း သ တင်း များ ထွက် ပေါ်လာ နေ ပါ ပြီ ။
ဖိုး ပြည့် စုံ နဲ့ ဗ ဟန်း မြို့ ရဲ စ ခန်း တွင် တ ရား စွဲ ဆို ထား သော တေး သံ ရှင် ဖြိုး ပြည့် စုံ ပါ ၃ ဦး အား ဓာ တု ဗေ ဒ ဝန် ရုံး မှ ပြန် ကြား ချက် အ ရ မူး ယစ် ဆေး ဝါး မ ဟုတ် ခြင်း အ ရ လည်း ကောင်း ၊ ဥ ပ ဒေ မှ တ ရား စွဲ ဆို ရန် မ သင့် ကြောင်း အ ကြံ ပြု ချက် အ ရ လည်း ကောင်း ယ နေ့ ည နေ ၃ နာ ရီ မိ နစ် ၃ ၀ အ ချိန် က ကျင့် ၁ ၆ ၉ အ ရ အ ချုပ် မှ လွှတ် လိုက် ပြီ ဖြစ် ကြောင်း သ တင်း များ ထွက် ပေါ်လာ ပါ ပြီ နော် ။
အ တည် ပြု သ တင်း များ နှင့် နောက် ဆက် တွဲ ပြော ကြား ချက် များ ကို အ ချိန် နဲ့ တ ပြေး ညီ တင် ဆက် ပေး သွား မည် ဖြစ် ကြောင်း ။
Previous: ထိုက် ထိုက် က ဗိုလ် ချုပ် ရုပ် ရှင် နဲ့ ပတ် သက် ပြီး ဗိုလ် ချုပ် သာ သိ လို့ က တော့ ပါး တွေ ချည်း ချ မှာ လို့ ဆို …
Next: ” ဥ ပ ဒေ နဲ့ အ ညီ လွှတ် တာ နော် ။ ဗ ရမ်း ဗ တာ လွှတ် တာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး ” ဟု ရဲ မှုး သိန်း ဝင်း က ပြော